पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमित हुने भन्दा निको हुने ३ हजार भन्दा बढी ! – Sandesh Press
काठमाडौं : नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा सं’क्रमित हुने भन्दा सं’क्रमणमुक्त हुने ३ हजार भन्दा बढी रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार ४२ जनामा को’रो ना भा’इरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ८ हजार २४३ सं’क्रमणमुक्त भएका छन्। देशभर आरटी–पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट जामा १६ हजार ८१४ परीक्षण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका प्रयोगशालाहरुमा गरी ११ हजार ४७१ जनाको आरटी–पीसीआर विधिबाट नमूना परी क्षण गरिएको थियो। आरटी–पीसी आर विधिबाट गरिएको परीक्षणका क्रममा ३ हजार ५४० जनामा संक्र मण पुष्टि भएको हो।
यस्तै, सोही अवधिमा ५ हजार ३४३ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा १५०२ जनामा को’रो ना सं’क्रमणको संकेत (एन्टिजेन पोजेटिभ) देखिएको हो । पछिल्लो २४ घन्टामा को’रोना सं’क्रमणवाट ६८ जनाको नि’धन भएको छ । यो सहित हालसम्म कोरो नावाट नि’धन हुनेको जामा संक्या ७ सय ७९९ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
Prevस्वास्थ्य सहायता बो’केर अष्ट्रेलियाली रक्षा मन्त्रालयको जहाज काठमाडौंको लागि उड्यो
Nextबि’चरा ! कस्तो जन्म भयो नि यस्तो, “म बाँ’च्न चा’हान्न मलाई म’र्न दिनुस” भन्छन (भिडियो हेर्नुस्)